> Resource> Video> Olee otú Mee a Multi ihuenyo Video
The multi ihuenyo mmetụta na ọtụtụ-eji video Ndinam ma ọ bụrụ na ihe karịrị otu set nke ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo ga-egosipụta n'out oge iji na-agwa a akụkọ ma ọ bụ ibuga ozi ndị ọzọ. Iji mee ka a n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) nwere ike ịbụ ezi nhọrọ. Na ya, ị dị nnọọ mkpa ka ịgbakwunye video clip ị chọrọ machie dị ka gị foto na-na-na foto na na usoro iheomume, mgbe ahụ, ọ ga-positioned n'elu video ị chọrọ ije ozi dị ka ndabere gị video. N'okpuru ebe a bụ n'ọnụ-enyere gị aka ịghọtakwu esi mee ka a n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video.
1 Tinye a video ma ọ bụ oyiyi na ị chọrọ machie
Mgbe-agba ọsọ a software, pịa "Import" mbubata gị video ma ọ bụ oyiyi ka usoro ihe omume. Mgbe ahọrọ faịlụ na ị chọrọ machie ka PIP track, ị ga-enweta a raw multi ihuenyo video.
2 hazie gị n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video
Mgbe ahụ hazie gị n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video dị ka amasị gị. Ugboro abụọ pịa lekwasịrị faịlụ ma họrọ "Advance" mee ka gị na multi ihuenyo video ọzọ doro anya site na-agbakwụnye ọzọ mmetụta ma ọ bụ kpatụ size na ọnyịnye gị clip. Ị ga-enwe ike ịhụ ọnọdụ na size mgbanwe ke preview window n'akụkụ aka nri nke mmetụta dialog igbe.
Mgbe ihe nile na-egosipụta n'ụzọ ị chọrọ ya, nanị na-emechi igbe ma na-etinye gị na mgbanwe. Wee pịa "Play" na akara ngosi na ịhụchalụ gị nkiri, ị ga-ahụ gị re-sized na re-positioned video clip machie n'elu nke ibu clip.
3 Zọpụta ma ọ bụ ịkọrọ gị n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video
Ọ bụrụ na ị enwe obi ụtọ na N'ihi ya, pịa "Mepụta" ịzọpụta ma ọ bụ ịkọrọ gị n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video. Ebe a nwere ọtụtụ mmepụta nhọrọ maka gị:
Ngwaọrụ: Họrọ si iche iche na ngwaọrụ na-enweta kachasị multi ihuenyo videos. Wee pịa obere triangle button ịgbanwe elu ntọala dị ka video na ọdịyo encoder, etiti ọnụego, bit ọnụego, wdg
Format: Zọpụta multi ihuenyo video niile na-ewu ewu video formats dị ka AVI, WMV, MOV, Flv, MP4, MKV, MPEG, wdg
YouTube: Wet ke gị YouTube ozi akaụntụ na video ọmụma ịkọrọ gị ọrụ na YouTube ozugbo.
DVD: Nịm DVD kwa ka DVD labeelu, Video Ogo, TV Standard na akụkụ ruru, na mgbe ahụ ọkụ video ka DVD.
Ị na-ahụ, na-eke a n'ikuku ana enweta n'otutu ihuenyo video na Filmora bụ na mfe. Jiri otu usoro na-etinye oyiyi na ihuenyo, ị nwekwara ike mfe tinye gị onwe gị logo ka videos.